192-168-1-1 IP Address Info anotevera mureza nzira yokushandisa cherogi mafaira. mafaira izvi danda vashanyi pavanoshanyira Websites. All nemitambo makambani kuita izvi uye chikamu nemitambo mabasa’ analytics. Mashoko inounganidzwa ne cherogi mafaira zvinosanganisira Internet dzakati (IP) kero, Browser mhando, Internet Service Provider (ISP), Musi uye nguva chidhindo, kureva / mbudo mapeji, uye zvichida uwandu the clicks. Aya hakunei chero mashoko anonyatsofarira kuvezwa. Chinangwa mashoko nokuda chokuongorora yokurera, vachiita nzvimbo, club vanozvishandisa’ Bato riri Website, uye achiunganidza wevanotungamirira ruzivo.
Somumwe Website, 192-168-1-1 IP Address Info anoshandisa 'makeke'. Cookies aya anoshandiswa kuchengeta mashoko kusanganisira vaenzi’ zvaunoda, uye mapeji pamusoro Website kuti mushanyi kuvhurwa kana akashanyira. The ruzivo rinoshandiswa optimize vanozvishandisa’ nezvakaitika customizing edu padandemutande peji kugutsikana kunobva Vashanyi’ Browser mhando uye / kana mamwe mashoko.
Google DoubleClick nemutsunda Cookie
Cherechedza kuti 192-168-1-1 IP Address Info haana kuwana kana kudzora Cookies izvi zvinoshandiswa nevanhu wechitatu-party vanoshambadzira.
Unogona kusarudza chokukuvadza makeke kuburikidza yenyu nomumwe Browser mikana. Kuziva uwane mashoko pamusoro kudzayi utariri zvimwe padandemutande browsers, unogona kuwanika browsers’ dzazvinogara Websites. Chii Cookies?
Chimwe chikamu pakutanga wedu achiwedzera kudzivirira vana apo Indaneti. Tinokurudzira vabereki uye vachengeti kutevedza, kuitawo, uye / kana kuongorora uye kutungamirirwa zvavo paIndaneti basa.
192-168-1-1 IP Address Info asingadi vachiziva unganidza chero Personal Identificável Information kubva kuvana pasi pemakore 13. Kana uchifunga kuti mwana wenyu wemabatiro mashoko mhando iyi website yedu, tinokukurudzira zvakasimba kuti isu runhare pakarepo uye tichaita zvatinoita zvakanaka kukurumidza kubvisa mashoko akadai kubva zvinyorwa zvedu.